विश्वकै म्याकडोनाल्ड रेस्टुरेन्टहरूको संख्या
म्याकडोनाल्डको कर्पोरेट वेबसाइट (जनवरी 2018) को अनुसार, म्याकडोनाल्डको 101 वटा देशहरूमा स्थान छ। संसारभरका 36,000 भन्दा अधिक रेस्टुरेन्टहरू हरेक दिन69 लाख मानिसहरू सेवा गर्छन्। तथापि, "देश" को रूपमा सूचीबद्ध यी मध्ये केहि स्थानहरू स्वतन्त्र देशहरू छैनन्, जस्तै पुर्टो रिको र वर्जिन टापुहरू जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाका क्षेत्रहरू हुन् र हङकङ, स्थापनाको समयमा ब्रिटिश नियन्त्रणमा रहेको थियो। चीनमा हस्तान्तरण।
फ्लोप्साइडमा, क्युबाको टापुमा म्याकडोनाल्डको है, यद्यपि यो टेक्नोलोजीको क्युबामा माटोमा छैन- यो गुआंगानामोमा अमेरिकी आधारमा छ, त्यसैले यो अमेरिकी स्थानको रूपमा योग्य हुन्छ। देश परिभाषाको बावजुद, स्थानहरू मध्ये 80 प्रतिशत स्वामित्वमा रहेका छन् र फ्रान्सेलीहरूले सञ्चालन गर्छन्, र 1.9मिलियन मानिसहरू म्याकडोनाल्डको लागि काम गर्छन्। 2017 मा, फास्ट-फूड रेस्टुरेन्टको लागि राजस्व 22.8 बिलियन डलर थियो।
1955 मा रे कोरू ने इलिनोइस मा आफ्नो पहिलो स्थान खोला (मूल रेस्टुरेन्ट कैलिफोर्निया मा रहेको); 1965 सम्म कम्पनीमा 700 स्थान थियो। केवल दुई वर्षपछि कम्पनीले 1967 मा क्यान्सर (रिचमन्ड, ब्रिटिश कोलम्बिया) र प्यर्टो रिकोमा आधिकारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलाइएको थियो। अहिले, क्यानाडा 1,400 म्याकडोनाल्डको रेस्टुरेन्टहरू छन्, र पुर्टो रिको 104 जना छन्। क्यानाडाको म्याकडोनाल्डका स्थानहरू क्यानाडाको मासुको सबैभन्दा ठूलो रेस्टुरेन्ट खरिद हुन्। देशमा।
विभिन्न म्याकमेनस वर्ल्डवाइड
उनीहरूको अवयवहरू जहाँ उनीहरूले काम गर्छन् उनीहरूको सामग्री खरीद गर्दा पनि रेस्टुरेन्टहरूले म्याकडोनाल्डको मेनु स्थानीय स्वादमा पनि अनुकूलन गर्दछ, जस्तै जापानले पोर्क पेटी टेरियाकी बर्गर र "साउडवेड शेकर" वा चॉकलेट-ड्रेज्ज फ्रिजको सेवा गरिरहेका छन्, जर्मनीले चिनियाँ बर्गर पिर्मिगोियानो- रेजिग्जियो पनीरसँग अष्ट्रेलिया, अष्ट्रेलियाले फ्रिजको लागि टपिंगको रूपमा गुए सासाला वा एक बेकन पनीर सस प्रदान गर्दछन्, र फ्रान्सेली ग्राहकहरूले कारमेल केला हान गर्न सक्षम छन्।
स्विट्जरल्याण्ड मात्र उपलब्ध छ McRaclette, मासुको एक स्यान्डविचमा रैलेप्टे पनीर, गेरबिन अचार, प्याज, र एक विशेष रैच्छटी सॉसका टुक्राहरू समावेश गर्दछ। तर भारतमा बीफलाई बिर्सनुहोस्। त्यहाँ मेनुले शाकाहारी विकल्पहरू समावेश गर्दछ, र तिनीहरू कुखुराको रूपमा पाक खाना पकाउने भान्साका खानाहरूमा कुकुरहरू बनाउँछन्, शाकाहारी व्यंजनहरू पकाउँदैनन्।
ऐतिहासिक रूपमा विश्वभरका महत्वपूर्ण स्थानहरू
शीत युद्धको क्रममा, देशको म्याकडोनाल्डको रेस्टुरेन्टहरूमा केही उद्घाटन ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू देखा पर्दछ, जस्तै पूर्वी जर्मनीमा पहिलो पटक सन् 1 990मा बर्लिन पर्खाल पछि केही समयपछि अथवा 1909मा रूस (त्यसपछि एसएसएसआर) भयो (धन्यवाद prerestroika र glastnost गर्न को लागि) या 1 990को दशक को शुरुवात को समयमा अन्य पूर्वी ब्लॉक राष्ट्रहरु र चीन।
म्याकडोनाल्ड विश्वमा सबैभन्दा ठूलो फास्ट-फूड चेन हो?
म्याकडोनाल्डको एक विशाल र शक्तिशाली फास्ट फूड श्रृंखला हो तर यो सबैभन्दा ठूलो होइन। सबवे सबैभन्दा ठूलो हो, 43985 स्टोरहरूसँग 112 देशको प्रारम्भमा। यो पनि, धेरै "यी देशहरू" स्वतन्त्र छैनन् र केवल क्षेत्रहरू हुन्। र सबवे रेस्टुरेन्टले निश्चित रूपमा सबै समावेश गर्दछ जुन अन्य भवनहरू (जस्तै सुविधा सुविधाको आधा, उदाहरणका लागि) को मात्र स्टैंडअलोन रेष्टुरेन्टको स्थान गन्ती गर्नुको साथै हो।
तेस्रो धावक अपको आधिकारिक वेबसाइट अनुसार 125 वटा देशमा 20,500 स्थानहरू छन् जुन केसी (पहिल्यै केन्टकी फ्राइड चिकन) हो। अन्य व्यापक रूपमा फैलिएको विश्वव्यापी खाद्य ब्रान्डहरू जो संयुक्त राज्यले निर्यात गरेको छ, पिज्जा हट (14,000 स्थानहरू, 120 देशहरू), र स्टारबक्सहरू (24,000 स्थानहरू, 75 मार्केटहरू) समावेश छन्।
तपाईलाई भूगोलको बारेमा जान्न आवश्यक छ
के महिला खराब नेविगेटरहरू छन्?
7 औं गणित कोर्स अध्ययन
बेर-चक्कुले बक्सिङको इतिहास
पाठकहरूको लागि उत्तम पुस्तक लाइटहरू के हुन्?
ज्योतिष मा आठवें घर
कन्फ्यूसियस 'जन्मदिनको उत्सव
आवश्यक श्रम गीतहरू
पानीको बोतलको सुरक्षित प्रकार कुन हो?
शेक्सपियर नाटकबाट उद्धरण
कीराहरू किन रोशनीमा आकर्षित हुन्छन्?
पालतू Millipedes को हेरचाह गर्ने एक गाइड
Vicksburg को घेराबंदी
इक्विट्स थिए रोमन शूरवीर
आपदा पछि, तिनीहरू पुनर्निर्माण गर्छन्
एशले मास्सारो एल्कोर्ट सेवा हटाइयो
'विला लिड' गीत, अंग्रेजी अनुवाद, र सिफारिश गरिएको रेकर्डिङ
"Schrodinger's Cat" Ideas Experiment को बुझन
फुरमन विश्वविद्यालय प्रवेश
कसरी काम गर्न सकिन्छ?
'एडरको गेम' उद्धरणहरू
प्रोर्करीट्स बनाउ युकुरीट्स: भिन्नता के हो?
टेलिफोनमा - संवादहरूको साथ अंग्रेजी अभ्यास गर्नुहोस्
Chantels: रक को पहिलो "केटी समूह"
Juried Art शो
असाधारण घटनाको बारेमा सोधिने प्रश्नहरू